मतदाताको रोजाईका उम्मेदवार ? - Pradesh Today
Homeफिचरमतदाताको रोजाईका उम्मेदवार ?
मतदाताको रोजाईका उम्मेदवार ?
शान्तिनगर गा.पा.–६ दाङ
प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओलीको निधनपछि अहिले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन हुन लागेको दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) प्रदेशसभा सदस्यको लागि उपनिर्वाचन हुँदै गर्दा कस्ता उमेदवारलाई भोट दिने भन्नेमा हामी पनि छौँ । राम्रा र सक्षम उम्मेदवार छनौट हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो । जनताका समस्या आफ्नै समस्या जस्तै ठान्ने नेता हामीलाई चाहिएको छ ।
विकासका नाममा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको समयमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेता चाहिएको छ । आफ्नो भाषणभन्दा पनि जनताको रासनमा ध्यान दिने नेता छनौटमा आमनागरिक चनाखो हुनुपर्छ । वर्षौदेखि हामीले पार्टी र शक्तिको आडमा भोट हाल्दै आएका छौँ । अब पुरानो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म यसपटक कुनै पार्टी विशेषभन्दा पनि व्यक्तित्व हेरेर मत दिने विचारमा छु ।
नागरिकका समस्या समाधानमा गम्भीर हुनसक्छ कि सक्दैन् हामीले ति कुराहरूलाई बडो गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने देखिएको छ । नागरिकलाई जति ‘जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने नेपाली उखान अब लागू नहोस् ।
ति कुरालाई मध्यनजर गर्दै सहरभन्दा पनि ग्रामीण भेगका नागरिक समस्यालाई समाधान गर्ने खालको नेता छनौट गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ । गाउँमा अहिले पनि नागरिक सामान्य आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । ति आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने नेतालाई आम नागरिकले साथ दिन्छन् ।
जहिले पनि भोट माग्दा जनताको घरदैलोमा आउने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित भइसकेपछि जनताका समस्यालाई बिर्सने परम्परा रहेका छ । ति कुराहरूको अन्त्यका लागि हामीले उम्मेदवार छनौट गर्दा अर्थात् भोट दिदा चिन्न सक्नुपर्दछ ।
नागरिक विस्तारै सचेत हुन थालेका छन् । अब पनि पुरानै स्थितिमा नागरिकले भोट दिने अवस्था छैन् । वर्तमान देखिएका दुरावस्थाको चित्रण गर्दै हामी योग्य, दक्ष र सक्षम नेतृत्व चुन्नुपर्छ भनेर छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ । नागरिकले हिजो पनि मत दिएर गएका नेतृत्व अहिले बिर्सने अवस्था पनि देखिएको छ । हामीले अब चुन्ने नेताले त्यस्तो गर्नु हुनेछैन् भन्ने विश्वासका साथ मत दिने हो ।
विकास सम्झिरहने नेता
बबई गा.पा.–३ दाङ
पश्चिम क्षेत्रका नागरिकलाई फेरी नेतृत्व छनौट गर्ने अवसर आएको छ । १४ मंसिरको उपनिर्वाचन मिति नजिकिदै छ । मिति नजिकिदै जाँदा दल तथा उम्मेदवारले छलफल र भेटघाटलाई व्यस्त बनाइरहँदा हामीले पनि कस्ता उम्मेदवार छनौट गर्दा हाम्रो गाउँ ठाउँको विकास हुन्छ भन्ने सोंच गरिरहेका छौँ ।
जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताकै लागि सर्मपित हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । जनताका समस्यालाई बुझ्न सक्ने नयाँ सोंच र नयाँ उद्देश्य बोकेका उम्मेदवारलाई नै छनौट गर्ने सोंचमा छु ।
जनताका तिब्र आकांक्षा छन् , लोभ र सत्ताको आडमा भन्दा पनि जनताका आवश्यकतामा भिज्ने नेतृत्व पश्चिम दाङलाई चाहिएको छ । स्वर्गीय उत्तरकुमार ओलीले पूरा गर्न नसकेका योजना अब आउने नेतृत्वले पूरा गर्ने छ त्यस्तो नेतृत्व नै छनौट हुुनुपर्छ । समाजमा देखिएको गरिबी, वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गरी समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व छनौट गर्ने साेंचमा छु ।
समाजमा अहिले पनि विभिन्न सामाजिक विकृति छन् ति विकृतिका विरूद्ध लागेर सुखी र सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने नेतृत्वले नै भोट पाउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीलगायतका समस्याबाट जनता आजित छन् । ति कुरालाई पनि प्राथमिकतामा पारेर जतिसक्दो छिटो नागरिकका अपेक्षालाई पुरा गर्ने उम्मेदवार नै छनौटमा पार्नेछौँ ।
अहिलेको परिस्थितिमा करिब दुई वर्षमात्रै छ । यही छोटो समयलाई छोपेर नागरिकले महशुस गर्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्छ । कुनै पनि विकास निर्माणमा देखिने गरेको अनियमिताका विरूद्ध लागेर विकास निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
जनताले भोट दियो निर्वाचित भयो तर पछि बिर्सने परम्परा पनि निकै छ । हामीले विकास र जनता दुबैलाई नबिर्सने नेता खोजेका छौँ । अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवार पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने उम्मेदवारले नै अहिले मत पाउनुहुन्छ ।
समाजमा योगदान दिन सक्ने
बबई गा.पा.–७ दाङ
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि म पनि भोटर हो । मतदात म भएका कारण मैले यसपटक कर्तव्यनिष्ठ, कुलतमा नफसेको, नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने नेतालाई छनौट पर्ने पक्षमा छु । हाम्रो गाउँमा अहिले पनि वर्षौँदेखिका योजना निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । ति योजना पनि निर्माण सम्पन्न गरी नयाँ योजना ल्याउन सक्ने नेतृत्व छनौट गर्ने सोंचमा छु ।
अहिले उम्मेदवारहरू भोट माग्न आइसक्नुभएको छ । विषेशगरी दुई ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवार भोट माग्न आउनुभएको छ । मैले उहाँहरूलाई स्पष्टरूपमा योजना ल्याउनुस् र ति योजना कहिलेसम्म पूरा हुन्छन् भन्ने ग्यारेण्टी पनि गर्नुपर्छ भनेको छु । हाम्रो ठाउँमा खानेपानीको समस्या छ तर समाधान हुन सकेको छैन् ।
बेलघारीमा डिपबोरिङ खनिएको छ, डिपबोरिङ खनेको करिब चार वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले कडाई गर्न सक्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गरी छिटो निर्माण सक्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ ।
करिब १३ करोडमा लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त योजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेछ र त्यस्ता उम्मेदवारलाई नागरिकले छनौट गर्ने छन् ।
गाउँमा शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नै छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ प्रयास भएको छ । ति प्रयासहरू सार्थक बनाउने गरी नागरिकले नेतृत्व छनौट गर्नेछन् । लामो समयदेखि अभाव र दबावमा रहेका हामी नागरिकलाई अबको नेतृत्वले सुखी र सम्पन्नशाली बनाउने छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।
मैले कुनै एउटा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि व्यक्ति विषेशलाई ध्यान दिएर मत दिनेछु । राजनैतिक व्यक्तित्व भएपनि उक्त व्यक्तिले समाजमा योगदान दिन सक्ने हेरेर मत दिने सोंचमा छु ।
पहिलेको र अहिलेको अवस्था एउटै छैन् । नागरिक अहिले धेरै जागरूक भैसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा सत्ता र राजनैतिक दबावका कारण पनि भोट हाल्ने गरेको पाइन्छ । मेरो सोंच के हो भने जनताले खुल्ला हृदयले मनले खाएको उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
दंगीशरण–६ लेटार, दाङ
जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि निस्वार्थी र निष्पक्ष हुनुपर्छ । नेता र कार्यकर्ताभन्दा पनि आमनागरिकलाई समानरूपमा देख्ने हुनुपर्छ । म पनि त्यस्तै नेतालाई भोट दिने सोंचमा छु । चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता सबै पूरा हुँदैनन् तर देखिने गरी काम पक्कै पनि गर्नुपर्छ । मैले २०३५ सालदेखि भोट हाल्दै आएको छु । मैले जिताएर पठाएका नेतृत्वले पनि सबै काम पूरा गर्न सकेको पाएन ।
अब अहिले फेरी यहाँको विकासका लागि नेतृत्व छनौट गर्ने बेला आएको छ । नेतृत्वले हाम्रा आवश्यतालाई नजिकबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ । म के चाहन्छु भने अहिले जसरी भोट माग्न गाउँमा नेता आउनुहुन्छ त्यसैगरी चुनाव जितेर गएपछि पनि गाउँमा आउने नेता नै जनताको नेता हो ।
त्यस्तै नेतृत्वलाई छनौट गर्नेछु । गाउँमा अहिले विभिन्न किसिमका समस्या छन् । जनताले राखेका समस्यालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने नेतृत्व छनौट गर्ने सोंचमा छु । चुनावअघि थुप्रै प्रतिवद्धता गर्ने तर जितेर गइसकेपछि विभिन्न कारण देखाउँदै विकास नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि छ ।
यस्तो कुराको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सोंचका साथ हामीले स्वच्छ, निष्पक्ष रूपमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रो योग्य उम्मेदवार छनौट गर्नेछु । हामीलाई गर्न नसकिने सपना नबाँडे हुन्छ, जति गर्न सकिन्छ त्यति योजना ल्याउने नेता चाहिएको छ ।
काम नगर्ने भाषण ठूला गर्ने नेतृत्वदेखि होसियार हुनुपर्छ । सक्षम र निस्वार्थी नेतालाई भोट गर्नुपर्छ । पश्चिम दाङमा स्वर्गीय उत्तरकुमार ओलीले जुन योजना ल्याउनुभएको थियो, ति योजनामात्रै नभएर अझ नयाँ हामीले परिवर्तन देख्ने योजना ल्याउने उम्मेदवार छनौट गर्ने साेंचमा छौँ ।
वर्षौदेखि समस्या झेल्दै आएका नागरिक अबको नेतृत्वले केही भएपनि राहतको महसुस गर्नेछन् । हामीले त्यस्ता नेतृत्वलाई छनौट गर्नेछौँ । गणतन्त्र आइसकेपछि नागरिकले गणतन्त्रको महसुस गर्न पाएका छैनौँ । अब हुने उपनिर्वाचानबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकून् त्यस्ता उम्मेदवारले भोट पाउने छन् ।